कण्डम एक्सपायर भएको छ या छैन ? थाहा पाउन यी तरिका अपनाउनुहोस् | Hamro Doctor News
शुक्रबार, १७ असार २०७९ /
विपद् तथा महामारी प्रतिकार्यका लागि तयारी रहन अस्पतालहरूलाई मन्त्रालयको निर्देशन
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह छात्रवृत्ति तर्फको पहिलो भर्ना सूची प्रकाशित
देशभर उकालो लाग्दै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या, सक्रिय सङ्क्रमित ३ सय नजिक
गर्भपतनसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशपछि अमेरिकामा गर्भनिरोधक औषधिको माग बढ्यो
मनसुनमा रोग लाग्न नदिन आफ्ना बालबालिकालाई यसरी सुरक्षित राख्नुहोस्
गर्भनिरोध साधनको रुपमा अपनाइने विभिन्न साधनमध्ये कण्डम निकै सहज र भरपर्दो हो भन्नेमा अधिकांश नागरिकको बुझाइ छ । कण्डम प्रयोग गर्नमा सजिलो हुन्छ भने बजारमा पनि सहजै उपलब्ध हुन्छ र यो यति सानो हुन्छ कि यसलाई तपाईंले चाहे अनुसार जहाँपनि पकेटमा राख्न सक्नुहुन्छ । होल्याण्डको क्ल्यारि गिलेस्पाई एण्ड किम्बर्लीका प्रा.डा.जेनेट ब्रिटोका अनुसार कण्डमले नचाहेको गर्भ मात्रै रोक्दैन तपाईंलाई विभिन्न यौन सँग सम्बन्धीत रोगहरु एचआईभी, एड्स र गनोरियाबाट पनि जोगाउने काम गर्छ ।
आकार र फ्लेवरका कण्डम
कण्डमको सबैभन्दा राम्रो पक्ष यो हो की तपाईं बिना कुनै स्ट्रेस वा तनावले पार्टनरसँग सेक्सी र पेशिनेट क्षणको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ । कण्डम हरेक किसिमले आकार र फ्लेवरमा पनि पाइन्छ जसले गर्दा मानिसले आफ्नो इच्छा अनुसार छनोट गर्न सक्छन् । तर, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अन्य सामान जस्तै कण्डमको पनि एक्सपायरी डेट हुन्छ र एक्सायपर भइसकेको कण्डमको प्रयोग गर्नबाट जोगिनु पर्छ ।
यसरी गरौं जाँच
यदि कण्डमको प्याकेट खोलेर बाहिर निकाल्ने बित्तिकै कण्डम धेरै नै सुक्खा, चिपचिप वा निकै नै कडा अनुभव हुन्छ भने तपाईं त्यो कण्डमको प्रयोग नगर्नुस् ।
दुर्गन्ध आयो भने
यदि तपाईंले किनेको कण्डमबाट नराम्रो दुर्गन्ध आयो र कण्डमको रंगपनि खुलिएको छ भने कण्डम बिग्रेको वा एक्सपायर भएको हुन सक्छ । त्यसकारण यस्ता दुर्गन्धित र रंग खुलिएको कण्डमपनि प्रयोग गर्नबाट जोगिनुपर्छ । अन्यथा तपाईंलाई संक्रमण गराउन सक्छ ।
एक्यपायरी मिति जाँच गरौं
सँधै एक्सपायरी मिति जाँच गरेर मात्रै कण्डम खरिद गर्नुपर्छ । किनकी जसरी जसरी एक्सपायरी डेट नजिकिदै जान्छ कण्डमको इलास्टिसिटी र उसको असर कम हुन थाल्छ । त्यति मात्र नभई कण्डम हेर्नमा राम्रो भएपनि एक्पायरि मिति सकिसकेको अवस्थामा कण्डमको प्रयोग गर्नु हुँदैन । किनकी यदि तपाईंले यी कुरालाई वेवास्ता गरेर प्रयोगमा ल्याउनुभयो भने हुन सक्छ सेक्सको क्रममा त्यो च्यातियोस् ।
सहि तरिकाले गरौं प्रयोग
कण्डमको प्याकेट खोल्नका लागि कैंचीको प्रयोग कहिले पनि गर्नुहुँदैन । किनकी हुन सक्छ कैंचीले प्याकेट काट्दा कण्डमपनि काटियोस् । साथै ध्यान राखौं कि कण्डम वा त्यसकोप्याकेटमा तपाईंको नंग वा साँचोले प्वाल नपरोस । नत्र कण्डम बिग्रिन सक्छ । तपाईंको नंग वा साँचोले कण्डमको प्याकेट काट्दा त्यसमा प्वाल पर्ने हुनाले निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
Last modified on 2019-10-20 05:59:15
यौन स्वास्थ्यका बारेमा महिलाले जान्नैपर्ने कुराहरु...
के पुरुषमा प्रजनन् स्वास्थ्यको समस्या हुँदैन ? यसो भन्छ अध्ययन
कोरोनाका कारण यौन जीवन प्रभावित, यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी जान्नैपर्ने १६ तथ्यहरू
चाहँदाचाहँदै पनि किन बस्दैन गर्भ ?
काठमाडौंमा धमाधम देखिन थाले हैजाका बिरामी,यसबाट बच्न के गर्ने ?
महिला धेरै आकर्षित हुने यौन आसनहरु
हातखुट्टाको कापमा हिलोले खाएको छ ?
अध्यक्ष डा.अधिकारीको प्रश्न : भरतपुरलाई ‘मेडिकल हब’ बनाउन किन ढिलाइ ?